Virgin Atlantic dia mandefa sidina indroa indroa any Bahamas
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Bahamas » Virgin Atlantic dia mandefa sidina indroa indroa any Bahamas
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Bahamas • Vaovao Mafana • Karaiba • Hospitality Industry • Vaovao • fanorenana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Vaovao isan-karazany
Faly ny Minisiteran'ny fizahantany sy ny sidina Bahamas fa hanambara sidina roa ny Virgin Atlantic Airlines manomboka amin'ny seranam-piaramanidina London Heathrow mankany Nassau, Bahamas, manomboka ny 20 Novambra 2021.
Misy ny fitomboan'ny fangatahana eo amin'ireo mpandeha any UK mitady fialofana tropikaly, Bahamian.
Ny sidina Virgin Atlantic ho avy dia manomboka ny asabotsy 20 Novambra amin'ity taona ity.
Ity no fotoana mety indrindra handaminana ny fandosirana mankany Bahamas main-tany sy mafana amin'ny vanim-potoanan'ny fararano mangatsiaka ho avy any Angletera.
Mihena ny famerana ny fivezivezena manerana izao tontolo izao, manantena ny hanohy ny fandraisana ireo vahiny hiverina any amorony ny Bahamas.
"Faly be izahay fa misy serivisy fanidinana fiaramanidina indroa isan-kerinandro avy amin'ny seranam-piaramanidina Heathrow any Londres," hoy ny minisitry ny fizahan-tany sy fiaramanidina, Hon. Dionisio D'Aguilar.
“Mitombo ny fangatahana eo amin'ireo mpandeha any UK mitady fialofana tropikaly, Bahamian. Manantena ny hitsena azy ireo any amin'ny morontsiraka mahafinaritra izahay hiaina izay mahatonga ny firenentsika ho tokan-toerana tsy manam-paharoa any Karaiba. ”
Ireo mpandeha amin'ny sidina Virgin Atlantic atsy ho atsy, manomboka amin'ny 20 Novambra, dia afaka manantena ny tsara indrindra inona no atolotry ny Bahamas. Mandritra ny nosy dia hahita fitsaharana farany sy traikefa nahafinaritra ny mpivezivezy amin'ny alàlan'ny kolontsaina manankarena ao amin'ilay toerana, sakafo fisakafoana an-dranomasina tsy misy dikany ary zava-mahatalanjona voajanahary mahafinaritra. Manomboka amin'ny fasika miafina sy morontsiraka fasika mavitrika mitokana, hatramin'ny fisitrihana lavaka manga sy filomanosana miaraka amin'ny kisoa, dia misy zavatra tena ankafizin'ny rehetra. Tsy lazaina intsony, Downtown Nassau dia manolotra tsangambato, sary hosodoko ary tranombakoka 20 ho an'izay mitady hiroboka ao amin'ny tantaran'i Bahamas taonjato maro. Ny sidina dia hamidy amin'ny 11 Aogositra 2021, miaraka amin'ny sidina Economy miverina manomboka amin'ny $ 990.
Ireo izay mitady hamandrika ny fialan-tsasatra manaraka, na any Nassau na any amin'ny nosy mitsambikina manerana ny Out Islands, dia afaka mankany www.bahamas.com/deals-packages na manontany amin'ny solontenan'ny trano fandraisam-bahiny mba hahalala bebe kokoa momba ny fifanarahana sy ny fonosana azo alaina ao anatin'ny volana ho avy.